Vokatra SPL miasa amin'ny indostrian'ny Refrigeration
Raha tsy nisy ny Refrigeration dia tsy azo natao ny nankafy voankazo sy legioma isaky ny taona. Raha tsy misy ny Refrigeration dia tsy azontsika an-tsaina ny fandrosoana nitranga tamin'ny sehatry ny fahasalamana, varotra, indostria, toeram-ponenana ary fialamboly velona.
Miaraka amin'ny fitomboan'ny isam-batan'olona sy ny fiovan'ny fahazaran-tsakafo, ny fanatsarana ny fahombiazan'ny angovo ho an'ny fitaovana fampangatsiahana indostrialy sy indostrialy dia tena ilaina ho an'ireo mpanjifa mitady hampihena ny vidin'ny asa. Ity dia laharam-pahamehana manokana amin'ny indostrian'ny fanodinana sakafo, izay tery ny vola miditra.
Ny rafitra SPL Evaporative Condenser sy ny AIO Package Refrigeration dia manome fahombiazana avo lenta sy fampisehoana azo antoka ho an'ireo mpanjifany mitahiry renivohitra be.
Ao amin'ny SPL, manam-pahaizana amin'ny famolavolana namboarina izahay, notohanan'ny fanavaozana nandritra ny taona maro ary niara-niasa akaiky tamin'ireo mpanjifanay sy ireo andrim-pikarohana. Namolavola vahaolana mitarika tsena ho an'ny fampiharana marobe izahay, manomboka amin'ny ronono, hazan-dranomasina, hena, ary voankazo goavambe fanodinana voankazo sy legioma hafa.